Xaasaska Thailandiiska ah waa la ogolaadaa, laakiin nimanka Nigerian-ka ah waa la diidaa. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Xaasaska Thailandiiska ah waa la ogolaadaa, laakiin nimanka Nigerian-ka ah waa la...
Xaasaska Thailandiiska ah waa la ogolaadaa, laakiin nimanka Nigerian-ka ah waa la diidaa.
Qaar kamid ah ragga da´da ah ee Norwegianka, ayaa sanadaha danbe ee noloshooda dalalka dibadda ah kasoo guursada xaasas da´ahaan dhalinyaro ah, marka lala barbardhigo da´dooda. Dalka Thailand ayaana ah dalka ugu badan ee odoyaasha Norwegianka ee howlgabka ku dhow ay xaasaska kasoo guursadaan.
Dhanka kale qaar kamid ah dumarka ay da´dooda weynaatay ama calafkoodii ka waayay Norway, ayaa iyagana sanadihii danbe bilaabay inay wadamada dibadda ah kasoo guursadaan rag dhalinyaro ah, waxaana ugu badan qaaradda Africa, gaar ahaan Nigeria.
Xaasaska Thailand waa la ogolaadaa, laakiin ragga Nigerianka ah waa la diidaa:
Tirokoob uu sameeyay wargeyska Dagens Næringsliv ayaa lagu ogaaday in 97% ragga Norwegianka ah ee guursada xaasaska Thailandiiska ah loo ogolaadi inay xaasaskooda keenaan Norway, halka 46 %(Wax ka yar kala bar) dumarka Norwegianka ah ee soo guursada ragga Nigeria u dhashay loo ogolaado inay nimankooda keenaan Norway.
Mudadii u dhaxeysay sanadkii 2015 ilaa sanadkii 2019, waxaa Norway loo ogolaaday inay nimankooda la midoobaan 2401 dumar ah oo u dhashay dalka Thailand, halka diidmo la siiyay 83 dumar ah oo kali ah. Tiraadaas oo ka dhigan in 97% dumarka Nigeria la ogolaado.
Isla mudadadii waxay Norway diidmo siisay 54% ragga Nigeria u dhashay ee rabay inay la midoobaan xaasaskooda oo Norway degan.
UDI: Sax ma ahan in inta badan ragga Nigerianka ah la diido.
Cecilie Sande Amundsen oo katirsan UDI-da ayaa sheegtay inaysan sax aheyn sida loo dhigayo kiiska. Iyada oo sheegtay in farqi u dhaxeeyo kiisaska nimanka Nigerianka ah iyo kuwo kiisaska xaasaska Thailand u dhashay.
Cecilie ayaa sheegtay in qaar kamid ah ragga Nigerianka ah ay marka hore heleen diidmo, kadibna ay guursadeen xaasas ay dacwad ku xareystaan. Halka dumarka Thailandisk ah ay toos dalalkoodii uga soo baxaan.
Waxeyna raacisay in sidoo kale ragga Norwegianka ah ee xaasaska keena ay yihiin dad dhaqaale ahaan ladan, halka qaar kamid ah dumarka Norwegianka ah ee guursada ragga Nigerianka ah ay dhaqaale ahaan yara liitaan.
Xigasho/kilde: Nesten alle thailandske koner får opphold – de fleste nigerianske ektemenn kastes ut.
Previous articleDaawo: Wasiirka isdhexgalka oo booqatay xarun soomaalida iyo ajaaniibta kale lagu caawiyo.
Next articleBooliska oo lagu eedeeyay qaabkii ay uga jawaabeen weerarkii masaajidka Bærum.